Ungayikhetha kanjani i-LVT, SPC, WPC - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ungayikhetha kanjani i-LVT, SPC, WPC
Hlela: UDenny　2020-03-20　Iselula
Emakethe yanamuhla yokwakha phansi, abadume kakhulu yi-LVT flooring, i-SPC flooring kanye ne-WPC flooring. Wazi kangakanani ngabo? Okulandelayo, abakhiqizi be-KINUP bazokwethula kuwe!
Okokuqala ake sixoxe ngokuthi yiziphi izitezi ze-LVT, SPC, ne-WPC?
Uma ufuna ukwenza kucace ukuthi iyini i-LVT, SPC, WPC floor, kufanele uqale ngePVC floor. Iphansi le-PVC luhlobo olusha lwezinto zokuhlobisa floor floor ezithandwa kakhulu emhlabeni namuhla, ezaziwa nangokuthi "floor floor". Kungumkhiqizo odumile eJapan, eSouth Korea eYurophu, eMelika nase-Asia. Kuyaziwa emhlabeni wonke jikelele futhi kusetshenziswe kabanzi emakhaya, ezibhedlela, ezikoleni, ezakhiweni zamahhovisi, kumafektri, ezindaweni zomphakathi, ezitolo ezinkulu, emabhizinisini nakwezinye izindawo. "Iphansi le-PVC" lisho phansi okwenziwe nge-polyvinyl chloride. Ngokukhethekile, isebenzisa i-polyvinyl chloride ne-resin ye-copolymer yayo njengezinto zokwenziwa eziphambili, futhi ingeze izinto zokusiza ezinjenge-filler, plasticizer, stabilizer, and colorants, futhi kusebenza inqubo yokuhlanganisa noma ikhalenda, i-extrusion, noma i-extrusion ku-substrate eqhubekayo yeshidi. Kwenziwe ubuqili.
Isakhiwo esaziwa ngokuthi yi-PVC floor, esivame ukubizwa ngokuthi yipulasitiki, siyisigaba esibanzi samagama.Noma yimuphi umhlaba owenziwe nge-polyvinyl chloride ungabizwa ngokuthi yi-PVC. Izinhlobo ezintsha zephansi ezifana ne-LVT, SPC, ne-WPC empeleni ziyi-PVC. Esigabeni sephansi, bavele bengeza ezinye izinto ezihlukile, ngakho-ke bakha izigaba ezingezansi.
Intengo ethengiswa emakethe ye-LVT flooring isukela emashumini ama-yuan kuya kuma-yuan angama-200. Esikhathini esedlule, ibisetshenziselwa kakhulu amaphrojekthi wokusebenzisa amathuluzi. Ngoba idinga ukuphakama okuphezulu futhi idinga izisebenzi eziqeqeshiwe ukuyibeka, ngokuvamile ilungele ukucatshangelwa kwezindleko kuphela. Ukubekwa kwendawo enkulu.
Iphansi le-WPC liyisitezi epulasitiki elinezicingo eziqinile, ezaziwa ngokuthi yipulasitiki yokhuni .. Ngoba phansi ekuqaleni kweWPC kufaka ipulangwe ngokhuni, ibizwa ngokuthi yi-wood-plastiki floor. Ngokombono wenduduzo, i-WPC iyisitezi esiseduze kakhulu se-PVC kuya ku-floor solid floor floor izinkuni. Abanye abantu embonini bayibiza ngokuthi "flooring grade golden", kodwa intengo yayo iphakeme, imvamisa i-RMB 200--400 ngemitha yesikwele. , Futhi ayikwazi ukuphindwaphindwa.
Igama eliphelele le-SPC floor yi-Stone plastic composite, ebizwa nge-RVP floor eYurophu nase-United States. Yisakhiwo esitezi epulasitiki futhi singagobeka, kepha uma siqhathaniswa nesisekelo se-LVT, sincane kakhulu. Kuyathandwa kakhulu eYurophu nase-United States naseSoutheast Asia. Inazo zonke izici zephansi le-LVT neWPC floor, futhi ine-performanceproof-proof enhle kakhulu esebenza kahle futhi kulula ukuyifaka futhi ilungele i-DIY. Ukusebenza kwezindleko kokuphansi komhlaba kwe-SPC kuphezulu kakhulu. Intengo yezentengiso yemakethe imvamisa i-RMB 80-300 ngemitha yesikwele. Inezinzuzo eziningi, njengokuvikelwa okuphezulu kwemvelo, izinambuzane nokumelana nomiyane; ukumelana nomlilo omkhulu, umphumela omuhle wokumunca; eluhlaza futhi enobungane nemvelo, ayiqukethe i-formaldehyde, izinsimbi ezisindayo, i-benzene nezinye izinto eziyingozi. Okubi kwe-SPC ukuthi ubukhulu buphakathi nendawo futhi izindleko zokuhamba ziphezulu; ubukhulu bukhulu kakhulu, ngakho-ke kunezidingo ezithile zokuphakama komhlaba.
Eminyakeni yamuva nje, izimboni zokuphonsa phansi ze-LVT, SPC kanye neWPC zithuthuke ngokushesha. Ngokwe-data yokuthumela izinkambiso kanye nezinhlobo ezintathu zedatha yokuthengisa yaseChina, zikhombisile ukuthambekela kwesikhathi esizayo kokuphakama komhlaba, kanye ne-SPC flooring ngokusebenza kwayo okuphakeme. Emazweni athuthukile, amathayili we-ceramic kanye nokhuni phansi kuye kwathathelwa indawo kancane kancane, kwaba ukukhethwa kokuqala kwezinto zokuhlobisa phansi, ngakho-ke ukwakhiwa kwe-SPC kuthandwa kakhulu ngabantu, futhi amathemba okuthuthuka nawo abanzi!
Ungayikhetha kanjani i-LVT, SPC, WPC Okuqukethwe okuhlobene